Ururka Suxufiyiinta Madaxa banaan ee Soomaaliya (SOFO) oo cambaareysay xariga markale lagu riday Wariye C/casiis Koronto. |
Monday, March 4th, 2013 Ururka Suxufiyiinta Madaxa banaan ee Soomaaliya (SOFO) oo cambaareysay xariga markale lagu riday Wariye C/casiis Koronto.
ShareUrurka wariyeyaasha Madaxa banaan ee SOFO ayaa cambaareyn kulul ujeediyey dawlada Soomaaliya kadib markii Maxkamada Racfaanka Gobolka banaadir ay 6 bilood oo xarig ah ku xukuntay wariye Cabdicasiis Koronto.
Horay waxa maxkamada Gobolka wariyahaan ugu xukuntay hal sano oo xarig ah.
Xariga wariyaha waxa ku weliyey gabar sheegtay in ciidamada dawladu kufsi u gaysteen, Waxaa maxkamada darajada kowaad ay siidaysey gabadhii la xirnayd wariyeha, iyadoon aan cadayn dambigii gabadha horay loogu soo eedeeyey.
Uruku waxa uu sheegeen in ay dulmi tahay 6 bilood oo lagu xukumay wariye Cabdicasiis maadaama aysan maxkamadu wax sharci ah u cuskan xariga wariyaha. Wariyuhu waxa uu waraysi horay ola yeeshay gabar Soomaaliyeed oo dhibane ah waxaana uu u soo bandhigay ummada Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka taasina waa shaqada wariye kasta.
Ururku SOFO waxaa uu ka codsaday dawlada Federal-ka Soomaaliya inay xoriyadiisa u celiso wariye Cabdicasiis oo ku xiran si dulmi iyo cadaalad xumo ah, waxaana uu sidoo kale fariin udarey ururada Saxaafada ee caalamiga sida IFJ, CPJ, UAJ iyo haayadaha ku shaqada leh.
Waxaa ururka SOFO dabagel ku hayey arimaha la xiriira wariye Cabdicasiis Koronto waxaana ay marar badan ka codsadeen dawlada Soomaaliya in wariyaha xoriyadiisa dib loogu celiyo maadaama uusan wax dam ah lahayn.
Majiraan ilaayo hada wax dambi cad ah oo lagu soo cadeeyey wariyaha, Waxaa ururku sheegay go’aanka ay shalay maxkamadu gaartay inuu ahaa mid aan meelna haysan wax qodob ah na aan loo cuskan.
Dawlada Federal-ka Soomaaliya waxa ay mar walba iska indha tirtaa xaqa iyo ahmiyada wariyeyaasha Soomaaliyeed, Wariyeyaashu waxaa ay ku soo shaqaynayeen daruufo adag 20kii sano ee la soo dhaafay, waxaana soo food saaray dhibaatooyin aan kala joogsi lahayn sida dil, dhaawac, xarig, hanjabaad iyo barakicin.
Sarkaal ka tirsan dowladda oo ku dhintay iska hor imaad ka dhacay magaalada B/weyne
09 December,2013 at 07:59:06 / No comment C/qaadir Siidii “Waxaan nolosha ku haynaa rag ka mid ah Al-shabaab oo dagaal nagu soo qaaday”
09 December,2013 at 07:31:18 / No comment Shariif Xasan Sheekh Aadan oo si cad u sheegay inuu u tar tamaayo xilka madaxweyne ee maamulka K/galbeed Soomaaliya
09 December,2013 at 07:24:51 / No comment Wararkii ugu dambeeyay dagaalo culus oo ka dhacay deegaano ka mid ah gobalka Gedo
09 December,2013 at 07:22:04 / No comment Maamulka Gobalka Gedo oo ku baaqay in laga hortago maamulka KMG ee Jubba State
09 December,2013 at 07:19:54 / No comment Dr Jamaal Barrow oo maanta ku qaabilay Muqdisho Wakiilka bariga Afrika ee Wakaaladda iskaashiga caalamiga ee dowladda Japan‏
08 December,2013 at 15:36:27 / No comment Latest News in English